David Beckam iyo ciyaar-yahanno caan ah oo u kacay wax kaqabashada macaluusha qaybo kamid ah Soomaaliya. – Radio Daljir
David Beckam iyo ciyaar-yahanno caan ah oo u kacay wax kaqabashada macaluusha qaybo kamid ah Soomaaliya.
Ciyaar yahan David Beckam oo u dhashay dalka England kana mid ah ciyaar yahannada kubadda cagta magaca weyn ku yeeshay ayaa hadal qoraal ah oo uu ku qoray wargayska the mirror oo uu kaga hadlayey macaluusha ka taagan Geeska Africa waxa uu ku bilaabay Caruurta Soomaaliya iyo kuwa geeska africa waxay ku jireen dhibaatooyinka cunto la?aaneed oo aan lamalayn karin.
Sida aad warbaahinta kala socoteen maalmihii lasoo dhaafay macaluusha ku dhufatay Soomaaliya waa tii ugu xumayd mudo 50 sano ah waxaana malaayiin dad ah ay ka dhigtay kuwo halis ugu jiray masiibo ka dhacda Geeska Africa oo dhan.
Ugu yaraan 2 milyan oo carruur ah oo ku nool Soomaaliya oo kaliya ayaa todobaadyo badan seexanayey iyagoo gaajaysan, haddaba maanta iyo haddadan aynu taagannahay caruurtaasi waxay bilaabeen in ay gaajo u dhintaan.
6-dii daqiiqo ee kasta ilmo ku nool koonfurta Soomaaliya ayaa baahi u dhimanaya bal arintaasi wax yar ka fakara, kuwo badanna way dhiman doonaan todobaadyada soo socda hadii idinka iyo anigu aynaan wax ka qaban.
Maddoonayo in aan waligay arko saddexayda wiil ee Brooklyn, Romeo iyo Cruz oo seexda iyagoo gaajaysan mana garan karo sida ay xaaladdoodu tahay caruurtaasi Soomaaliya kunool oo xittaa iyagoo xoogaa bariis ah aan calooshooda ku jirn sariirta aadaya maalin kasta iyo todobaad kastasa.
Waxay u baahan yihiin caawinaaddeena, waxay ubaahan yihiin dadaalkeena, waxay u baahan yihiin ficilkeena ayuu kusoo gaba gabeeyey hadalkiisa ciyaar yahan David Beckam.
Dhinaca kale, ciyaar-yahano ka tirsan horyaalka kubadda cagta ee dalka Canada ayaa bilaabay olole lacag uruurin ah. Hawshan lacag uruurinta ah waxaa bilaabay nin ka tirsan guddiga ciyaaraha ee Canada oo lagu magacaabo Brandon Snowsell waxaana uu ugu magacdaray ololohiisa? dhali hal gool oo lagula dagaalamo macaluusha.?
Ololahan waxaa si dar-dar leh u socod siiyey kooxda uu ka tirsan yahay Snowsells oo ka tirsan horyaalka Saskatoon ee horyaalka cayaartooyda cuslaatay ee dalka Canada waxaana la qorsheeyey in ciyaar yahan kasta uu saddex qof ku qanciyo in ay bixiyaan $5 marka kooxdu ay gool dhaliso ciyaar kasta, deedna lacagtaasi loogu deeqo hay?dda laanqayrta cas ee Canada taasi oo ka id hayaddaha gargaarka abaaraha kawada Soomaaliya iyo Kenya.
Snowsell oo katirsan gudiga horyaalka Canada waxa uu dadaalkiisii ku fidiyey 123 kooxood oo katirsan horyaalka Saskatoon ee ciyaartooyda cuslaatay ee dalka Canada mudada u dhaxaysa 2-da ilaa 5-ta August. Kooxuhu waxay dhalin doonaan goolal kadibna lacagta laga ururiyo goolashaasi oo ah $5 gool kasta waxaa loogu deeqi doonaa abaaraha Geeska Africa.
?Iyadoo 2900 oo ciyaar yahan ay katirsan yihiin horyaalkeena waxaan rajaynayaa in ay lacag badan u soo uruurto macaluusha Geeska Africa iyadoo waliba koox aan anigu ka tirsanahay ay go?aansatay in ay ciyaar yahan kasta uu bixiyo $400 gool kasta oo uu dhaliyo? sidaasi waxaa yiri Snowsell.
Iyadoo abaarta Soomaaliya lagu tilmaamay tii ugu xumayd mudo 50 sano ah ayaa haatan beesha caalamku waxay waddaa dadaal xoog-leh oo lagu taageerayo dadka ay macaluusha saamaysay.
Wakaaladaha Wararka iyo Diiwaanka wararka Daljir,